Nzara Yoshaisa Mufaro Vagari vekuEpworth
Food Series Epworth VaBatanai Masunda
Muchirongwa chatiri kutarisa mamiriro akaita chikafu mumatunhu akasiyana siyana, tiri kutarisa zviri kuitika muEpworth pedyo neHarare. Nzvimbo iyi imwe yakanzi nesangano reWorld Food Program ine vanhu vakawanda vanoda rubatsiro.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muEpworth munyaya dzechikafu, sezvo vanhu vashoma, zvikuru vanasorojena vashoma ndivo vari kunyanya kuwana rubatsiro rwechikafu.
Ongororo yakaitwa neWorld Food Program (WFP) nemasangano anoshanda akazvimirira yakaratidza kuti pane vanhu vanodarika zviuru zana vanoda rubatsiro rwechikafu pavanhu vanodarika mazana mana ezviuru vanogara munzvimbo iyi.
Asi vamwe vevanhu ava havasati vave kuwana chikafu sezvo chiri chishoma zvikuru.
Amai Stella Nguruve vanogara kuOverspill vanoti vave nemazuva vachiedza kunyoresa kuti vawane chikafu asi zvichikona n’anga murapwa achida.
Mashoko aya anotsinhirwa naVaSolomon Mazarire avo vakaudza Studio7 kuti havasi kufara nekuti kunyange munhu akanyoresa kuti ari kutambura, anogona kutadza kutambira chikafu.
Munyori musangano reEpworth Residents Development Association, VaPeter Nyapetwa, vanoti kunyange hazvo nzara yatekeshera mumusha uyu, vanofara kuti masangano akaita seWFP ari kubatsira.
Vanoti WFP inopa vanhu mari dzekuti vatenge chikafu.
Asi vanoti havasi kufara nechirongwa chehurumende chinobatsira harawa nechembere nevamwe vanotambura icho vanoti hachisi kufambiswa zvakanaka.
VaMazarire vanotsigira mashoko aya vachiti zvinhu zviri kuitwa nenzira isina kujeka.
Vari kupihwa chibage vanopihwa makirogiramu makumi mashanu pavanhu vaviri kana kuti bhagidhi pamunhu wega wega.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo vanoona nezvedunhu iri kana kuti District Co-ordinator weEpworth-Ruwa, Amai Bernadett Mubaiwa, vati havana kupihwa mvumo yekuti vataure nevatori venhau pakugoviwa kwechikafu.
Kanzura weWard 3 kuEpworth, VaGift July, vanoti vanoona sekuti matambudziko pakugovewa kwechikafu anogona kupera kana makanzura akapihwa mukana wekutungamira hurongwa uhwu sezviri kuiitwa kumaruwa.
Mumiriri wenzvimbo iyi mudare reparamende, VaEthrage Kureva, vanobvumirana naVaJuly vachiti vamiriri vevanhu ndivo vanofanira kutungamira mabasa ekupa chikafu.
Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, Muzvinafundo Paul Mavima, vaudza Studio7 kuti nzara yemumadhorobha nemaguta yakasiyana nekumaruwa ndosaka vari kunyanyotarisa kumaruwa.
Asi vanoti vachavandudza chirongwa chekupa vanhu chikafu munguva pfupi inotevera.
Izvi zvatsinhirwa nemukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu mubazi raVaMavima, VaCliford Matorera, avo vanoti vachatanga kuita izvi muHarare neBulawayo.
VaMavima varambawo kuti pari kuitwa zvematongerwa enyika pakupa vanhu chikafu vachiti izvi zviri kuitwa pachena. Vati havakurudzire huori.
Vatiwo hurumende inotarisira kuti vanokwanisa vazvishandire vachitsvaka chikafu, iyo yotarisana neharawa nevaye vasikangakwanise kuzvishandira sezvo chikafu chacho chiri chishoma.
Nyaya yenzara yanetsawo zvekuti yave kuvhiringa dzidzo sezvo vamwe vana vechikoro vave kutadza kuenda kuchikoro kana kuti vave kufenda mumakirasi.
Vakuru vezvikoro munzvimbo iyi vakatokumbira Epworth Local Board kuti itaurirane nehurumende kuti vapihwewo chikafu.
VaBatanai Masimba ndivo kanzura weWard 6 zvakare vari sachigaro weEpworth Local Board, vanoti van vechikoro vanofanirwa kuwana chikafu chakakwana kuitira kuti vadzidze zvakanaka kuchikoro.
Mutevedzeri wavo muEpworth Local Board, zvakare vari kanzura weWard 4, VaKudakwashe Chatambudza, vanotiwo chero kwavo vana vechikoro vari kufenda nekuda kwenzara.
Vagari vemuEpworth vakaudza Studio 7 kuti zvikoro hazvisi kutambira chikafu sezviri kuita zvikoro zvekumaruwa.
Mumwe mugari, VaMoses Bwanausi, vanoti vanobvumirana nevakuru vezvikoro kuti chikafu chiendeswewo muzvikoro.
VaMavhima vanoti ichokwadi kuti zvikoro zvemumadhorobha hazviwani chikafu pasi pechirongwa chekupa vana vechikoro chikafu vachiti ichi chirongwa chiri kuitwa kumaruwa chete uko kune nzara yakanyanya kudarika mumadhorobha
Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa zvekuti vanhu mamiriyoni masere kusanganisira vanogara mumadhorobha vanoda rubatsiro rwechikafu.
Sangano reWFP rinoti rave nehurongwa hwekupa mhuri zviuru zana mumadhorobha rubatsiro rwechikafu mumatunhu masere. Vanhu vanenge vachipihwa bhinzi, chibage uye mafuta ekubukisa.
Gore rapera sangano iri rakapa vanhu vemuEpworth zviuru gumi nezvipfumbamwe zvemadhora serubatsiro rwemari paiparurwa hurongwa hwekupa vemumadhorobha chikafu.
Mari iyi yaibva kuUK Department for International Development uye kubazi reEuropean Union re European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. Gore rapera rakava rekutanga kuti WFP ipe vanhu zvekudya mumadhorobha.